ကိုရိုနာ – Na Pann San
ကိုဗစ် ထပ်တိုးလူနာအမှတ် (၁၈၁) သည် အင်းစိန်အဆက် မှ ကူးစက်ကာ ၎င်းနေထိုင်ရာနေရာ အလုံ၊ ဧရာဝတီလမ်း ကို ကို လော့ဒေါင်း ချ
Na Pann San W | May 13, 2020
ထပ်တိုးလူနာနံပါတ် ( ၁၈၁ ) နေထိုင်ရာ အလုံ ၊ ဧရာဝတီလမ်း ကို လော့ဒေါင်းချ ယနေ့ည ၈ နာရီ သတင်း ထုတ်ပြန်ချက် အရ ထပ်တိုးတွေ့ ရှိသော လူနာ နံပါတ် ( ၁၈၁ ) သည် ရန်ကုန်တိုင်း အလုံမြို့နယ် ဌာန ရပ်ကွက်
Na Pann San W | May 4, 2020
၁။ (၄-၅-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေပိုင်းတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ (ပထမ + ဒုတိယအသုတ်) စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၅၂) ခုနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန မှ စစ်ဆေး ပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ (၁၁၉) ခု၊ စုစုပေါင်း (၂၇၁) ခုတွင် • COVID-19 ရောဂါ ဓာတ်ခွဲအတည်ပြု
ဝူဟန့်မှာ lockdown မချခင် ကတည်းက Remdesivir ဆေးကို မူပိုင်ခွင့်တင်ခဲ့တဲ့ တရုတ် …မူပိုင်ခွင့်ဇာတ်ရှုတ် လာအုံးမှာလား..?
Na Pann San W | May 3, 2020
Covid-19 အရေးပေါ် ကုသဆေး မူပိုင်ခွင့် ဘယ်သူ ပိုင်သလဲ… ⁉️ Gilead ရဲ့ Remdesivir ဆေး ကို FDA က အရေးပေါ်ကုသဆေး EUA အနေနဲ့ ခွင့်ပြုလိုက်ပြီဆိုတော့ ကျနော်သိမ်းထားတဲ့ သတင်း တစ်ပုဒ်ကို ထုတ်ပြော ပါမယ်။ အခု တ ကမ္ဘာလုံးက ဝိုင်းအာရုံစိုက်နေတဲ့ Wuhan
တော်ရုံတိုင်းပြည်မချရဲတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ မြန်မာပြည်ရဲ့ ကိုဗစ်စစ်ပွဲ
တသိန်းနော် …တသိန်း …. ပြန်ဝင် လာမယ့် သူတွေ တသိန်း လောက် ရှိတယ် လို့ အမေ ပြောသွားတာပါ ။ ဒါဟာ ကမ္ဘာမီးလောင် သားတောင် ချနင်း ၊ ကိုဗစ် နဲ့ စစ်ဖြစ်နေတဲ့ ကာလ မှာတော်ရုံ တိုင်းပြည် မချရဲ တဲ့ ဆုံးဖြတ် ချက်
(၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ထုတ်ပြန်ကြေငြာချက်…. သတင်းကောင်း ထပ်တိုးလူနာ မရှိပါဘူးနော်
Na Pann San W | April 29, 2020
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၂၉-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေ၌ အမျိုးသား ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာ ဌာန(ရန်ကုန်)မှ (ပထမသုတ်) အဖြစ် စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော အသွားအလာ ကန့်သတ်ခံရသူ နှင့် စောင့်ကြည့်လူနာ (၈၉) ဦး၏ ဓာတ်ခွဲနမူနာများနှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR)မှ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော စောင့်ကြည့်လူနာ (၂၁)
လူနာ နံပါတ် (၁၅၀) သည် ပီးခဲ့တဲ့မတ်လ (၂၀) ရက်နေ့ထဲက တရုတ်မှ ပြန်ရောက်လာသူဖြစ် ဟုဆို
ယနေ့ ထပ်တိုး လူနာသစ် Case-150 သည် ဟားခါးမြို့ သီးဖူးလ်ကျေးရွာ မှ အသက်(၁၈)နှစ် အရွယ် အမျိုးသမီးဖြစ်ပြီး တရုတ်နိုင်ငံမှ ပြန်လာသူ ဖြစ်ပါသည်။ တရုတ်နိုင်ငံမှ မတ်လ (၂၀) ရက်နေ့တွင် မူဆယ်မြို့သို့ ရောက်ရှိခဲ့ပြီး မူဆယ်ရှိ တည်းခိုခန်းတခုတွင် ညအိပ်တည်းခိုခဲ့ကာ မတ်လ(၂၁)တွင် မူဆယ်မှ မန္တလေးမြို့သို့ ရွှေမန်းမန္တလာ မော်တော်ယာဉ်ဖြင့်
ဒီကနေ့ ည (၈:၀၀)နာရီ သတင်းထုတ်ပြန်မှု အရ အတည်ပြုထပ်တိုးလူနာ ၃ ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိ
Na Pann San W | April 28, 2020
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၂၈-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၈:၀၀)နာရီ ၁။ (၂၈-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ညနေတွင် အမျိုးသား ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) မှ (ပထမအသုတ်) အဖြစ်စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာ နှင့် ဆေးသုတေသနဦးစီးဌာန (DMR) မှ ဓာတ်ခွဲ စစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲနမူနာပေါင်း (၁၄၅) ခုအနက် • COVID-19
နိုဗယ်ဆုကို အာမခံထားပီး ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် လူလုပ် ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ကြောင်း ဖွင့်ဟလိုက်တဲ့ ဂျပန်ဆေးပညာရှင်
Na Pann San W | April 27, 2020
ဂျပ န်နိုင်ငံ ၏ ဇီဝကမ္မဗေဒ သို့မ ဟုတ် ဆေးပညာပါမောက္ခ ဒေါက်တာ Tasuku Honjo သည် ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်သည် “သဘာဝမဟုတ်သော အရာ” ဟု ယနေ့မီဒီယာများရှေ့တွင် ဖွင့်ဟခဲ့ပါသည်။ အကယ်၍သာ ၎င်းသည် သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ် လာသည် ဆိုပါက ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို ဆိုးဆိုးရွားရွား ထိခိုက် လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နိုင်ငံများတွင်
(၂၇-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၇:၀၀) နာရီ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်အရ ထပ်တိုးလူနာမရှိ
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၂၇-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက် (၇:၀၀) နာရီ ၁။ (၂၇-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ နံနက်အစောပိုင်းတွင် အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ဒုတိယအသုတ်) ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲအဖြေများအားလုံးတွင် – • COVID-19 ရောဂါပိုး မတွေ့ရှိပါ။ (လူနာသစ် မရှိပါ) ၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ (၂၇-၄-၂၀၂၀)
COVID-19 ရောဂါစောင့်ကြပ်ကြည့်ရှုမှုနှင့်ပတ်သက်၍ သတင်းထုတ်ပြန်ခြင်း(၂၄-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ ည (၁၁:၀၀) နာရီ
Na Pann San W | April 24, 2020
၁။ (၂၄-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့တွင် အမျိုးသား ကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန (ရန်ကုန်) (NHL) မှ (ဒုတိယ + တတိယ အသုတ်) ဓာတ်ခွဲစစ်ဆေးပြီးစီးခဲ့သော ဓာတ်ခွဲအဖြေများတွင် – • COVID-19 ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှု (လူနာသစ်) = (၁) ဦး ထပ်မံတွေ့ရှိခဲ့ပါသည်။ ၂။ သို့ဖြစ်ပါ၍ (၂၄-၄-၂၀၂၀) ရက်နေ့၊ အမျိုးသားကျန်းမာရေးဓာတ်ခွဲမှုဆိုင်ရာဌာန